Ny angano momba ny DMP amin'ny marketing | Martech Zone
Sehatra fitantanana data (DMPs) dia tonga teny an-toerana taona vitsivitsy lasa izay ary hitan'ny maro ho mpamonjy ny marketing. Eto, hoy izy ireo, dia afaka manana ny "firaketana volamena" ho an'ny mpanjifanay izahay. Ao amin'ny DMP, ny mpivarotra dia mampanantena fa afaka manangona ny fampahalalana rehetra ilainao ianao amin'ny fahitana 360-degre an'ny mpanjifa.
Ny olana tokana - tsy marina fotsiny izany.
Gartner dia mamaritra ny DMP ho
Rindrambaiko izay mihinana angona avy amin'ny loharano maro (toy ny ao anatiny CRM rafitra sy mpivarotra ivelany) ary manome izany ho an'ny mpivarotra mba hanangana sehatra sy lasibatra.
Mitranga ny mpivarotra DMP maromaro no ivon'ny Gartner's Magic Quadrant ho an'ny Hubs Marketing Digital (DMH). Ireo mpandinika Gartner dia manantena mialoha ny dimy taona ho avy ny DMP dia hivadika DMH, manome:
Mpivarotra sy rindranasa miaraka amin'ny fidirana an-tsokosoko amin'ny angon-drakitra mombamomba ny mpihaino, atiny, singa miasa, hafatra sy mahazatra Analytics miasa ho an'ny fandaminana sy fanatsarana ny fanentanana multichannel, resadresaka, traikefa ary fanangonana tahiry amin'ny fantsona an-tserasera sy ivelan'ny seranana, na amin'ny tanana na amin'ny programa.
Fa ny DMP dia noforonina tamin'ny fantsona iray tany am-boalohany: tambajotran-doka an-tserasera. Raha vao tonga teny an-tsena ny DMP dia nanampy ireo tranonkala hanolotra tolotra tsara indrindra izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana cookies mba hanarahana ny hetsika an-tranonkalan'ny olona tsy mitonona anarana. Avy eo izy ireo dia niditra tao amin'ny adtech ho ampahany amin'ny fizotrany mividy fandaharana, izay manampy indrindra ireo orinasa hivarotra amina sehatra manokana. Tena tsara ho an'ity tanjona tokana ity izy ireo, saingy manomboka tsy mahomby rehefa asaina manao fampielezan-kevitra marobe amin'ny fantsona maro hafa izay mampiasa ny fianarana milina ho amin'ny fomba kendrena kokoa.
Satria tsy fantatra anarana ny angon-drakitra voatahiry ao anaty DMP, ny DMP dia mety hanampy amin'ny fanaovana doka an-tserasera. Tsy voatery ho fantatrao hoe iza ianao no afaka manolotra doka an-tserasera mifototra amin'ny tantaran'ny fitetezana tranonkala teo aloha. Na dia marina aza fa ny mpivarotra dia afaka mampifandray angona be dia be an'ny voalohany, faharoa ary fahatelo amin'ny cookies ao anaty DMP, amin'ny ankapobeny dia trano fitahirizam-baovao fotsiny izy io ary tsy misy zavatra hafa. Ny DMP dia tsy afaka mitahiry tahiry betsaka toy ny rafitra mifandraika na mifototra amin'ny Hadoop.
Ny tena zava-dehibe dia tsy afaka mampiasa DMP ianao hitahiry fampahalalana azo fantarina manokana (PII) - ireo molekiola manampy amin'ny famoronana ADN tokana ho an'ny mpanjifanao tsirairay. Amin'ny maha mpivarotra anao, raha mitady haka ny tahirin-kevitra voalohany, faharoa ary fahatelo ianao mba hamoronana rafitry ny firaketana ho an'ny mpanjifanao dia tsy hanapaka azy fotsiny ny DMP.
Rehefa manaporofo amin'ny ho avy ny fampiasantsika haitao amin'ny vanim-potoanan'ny Internet of Things (IoT) isika dia tsy afaka ampitahaina amin'ny DMP ny DMP Sehatra ho an'ny mpanjifa (CDP) amin'ny fanatratrarana ilay "firaketana volamena" tsy fantatra. CDP dia manao zavatra tsy manam-paharoa - izy ireo dia afaka misambotra, mampiditra ary mitantana ny karazan-tahiry mpanjifa rehetra mba hanampy amin'ny famoronana sary feno (ao anatin'izany ny angona momba ny fitondran-tena DMP). Na izany aza, amin'ny ambaratonga sy ny fomba hanatanterahana izany dia miovaova arakaraka ny mpivarotra hatramin'ny mpivarotra.
Ny CDP dia namboarina hatrany ifotony hisambotra, hampiditra ary hitantanana ny karazan-tahiry mpanjifa mavitrika, ao anatin'izany ny angona avy amin'ny media sosialy sy ny IoT. Ho an'izay, mifototra amin'ny rafitra mifandraika na mifototra amin'ny Hadoop izy ireo, ka nahatonga azy ireo nahavita nitantana tsara kokoa ny safo-drakitra izay miandry eo am-pahatonga ny vokatra miorina kokoa amin'ny IoT tonga amin'ny Internet.
Izany no antony nanasaratan'i Scott Brinker ny DMP sy ny CDP ao aminy Marketing Technology Landscape Supergraphic. Nantsoina tao amin'ny tabilao logo 3,900+ an-tsokosoko izay sokajy roa misy mpivarotra samihafa.
Tamin'ny nosoratany nanambara ny sary, Brinker dia nanipika tsara fa ny Sehatra iray hitondrana azy rehetra ny hevitra dia tsy mbola nisy vokany, ary inona no misy fa tsy dia cobbling miaraka amin'ny sehatra hanatanterahana asa sasany. Ireo mpivarotra dia mivadika vahaolana iray ho an'ny mailaka, iray hafa ho an'ny tranonkala, iray hafa ho an'ny angona sns.
Ny ilain'ny mpivarotra dia tsy sehatra lehibe izay manao izany rehetra izany, fa sehatra angon-drakitra izay manome azy ireo ny fampahalalana ilainy handraisana fanapahan-kevitra.
Ny marina dia, samy mifandray amin'ny zavatra vao manomboka mipoitra i Brinker sy i Gartner: sehatra tena orkestra. Niorina tamin'ny CDPs, ireo dia natao ho an'ny marketing omnichannel tena izy, manome ny mpivarotra ireo fitaovana ilainy hanatontosana sy hanatanterahana ny fanapahan-kevitra aroson'ny data manerana ny fantsona rehetra.
Rehefa miomana rahampitso ny mpivarotra dia mila manapa-kevitra momba ny fividianana ny sehatr'izy ireo izy ireo anio izay hisy fiantraikany amin'ny fomba fampiasan'izy ireo amin'ny ho avy. Safidio am-pahendrena dia hanana sehatra ianao izay hanampy hampifanaraka ny zava-drehetra. Misafidiana tsy dia tsara ary hiverina eo amin'ny kianja iray ianao amin'ny fotoana fohy.
Tags: brikercdpCRMSehatra ho an'ny mpanjifasehatra fitantanana dataivom-barotra nomerikadmhdmpgartnertontolon'ny teknolojia marketingSehatra iray hitondrana azy rehetrascott brinker